Njalo wesifazane ufuna injabulo umama. Kuyinto ngiyibona zemvelo elihlobene ne uqobo ngokujulile ukwakheka komuntu. Nokho, amaningi awakulungele lokhu ngenxa yokuthi kufanele ubone udokotela wakho njalo futhi sikhuthazele ezinye zokukhwabanisa hhayi mnandi kakhulu. Kodwa ukuze ukukhulelwa waqhubeka kahle buthula kungcono ulandela imiyalelo wezazi, kunokuba sithembele kokwethu inhlanhla.
Ngaphambi kokuza emtholampilo yabakhulelwe ibhaliswe ku ukukhulelwa noma nje wokuhlola okuhleliwe, ladies kudingeka iqalele kabusha. Ayikho imizamo ekhethekile edingekayo, kodwa namanje Kunconywa ukuba ushawa. Akunakusetshenziswa akufanele douche noma into efana nalokho, ingabe konke okuhilelekile lesi sifo (uma ikhona), uzobe anyakaza, futhi lo dokotela akusho lutho. Kungcono ukuhlanza nelineni fresh futhi ithawula sanitary (uma kunesidingo).
Jikelele kanye nomlando ekhethekile
Njenganoma iyiphi enye udokotela, i Udokotela Wabesifazane ube nohlobo ejwayelekile ukubukeza umlando lesiguli. Kuhlanganisa idatha iphasipoti, izikhalazo, amarekhodi lokuhlala kanye nomsebenzi, wabonisa khona izifo zofuzo futhi ukutheleleka.
umlando Special igxile yokuthi udokotela waqonda umnyombo wenkinga ngawo lona wesifazane wacela. Kuhlanganisa imibuzo ngale ndaba, ubulili, ukukhulelwa kanye isisu. Ngaphezu kwalokho, sifinyeto edingekayo womshado lesiguli noma umlingani, kanye wenzalo wakhe.
Khona-ke baqala ucwaningo ukukhulelwa zamanje. Sungula yobudala sokukhulelwa, kunqunywa ubukhulu okhalo nesikhundla ingane esibelethweni.
Ukuzimisela ubudala sokukhulelwa
Kunezindlela eziningana ukubala yobudala sokukhulelwa kanye usuku kwezidingo. Eyokuqala wabo - ikhalenda. He is elula kakhulu. Udinga ukukhumbula ukuthi zingaki izinto ngosuku lokuqala isikhathi sakho wokugcina bese wengeza ku kuso 280 +/- ezingu-7, noma 10 sezinyanga. Ngakho ungakwazi ukuthola usuku esikiselwayo isenzakalo esijabulisayo. Uma owesifazane awukhumbuli usuku ukukhulelwa, isidingo kabusha ukungeza yonke efanayo amasonto 40, bese uthola izimpendulo embuzweni wabo.
Enye indlela kusekelwe ultrasound. Diagnostician ngu ubufakazi bezimo kungacacisa engu sokukhulelwa umbungu, anike usuku eseduze kwezidingo. Lapho OB ukuphakama lesizalo fundus ndawo futhi ibalwa yobudala sokukhulelwa. Kusukela 12 kuya 38 ngesonto kwesibeletho ubude ngamasentimitha oluhambisana ngesonto yokukhulelwa. Ungase futhi ancike eshukumisayo wokuqala we-fetus. Ngo nulliparous kwezwakala neviki nesishiyagalombili futhi multiparous - nesithupha.
Ubukhulu we ukhalo enkulu
Ukuze udokotela, ulwazi usayizi ukhalo owesifazane inenani, futhi idatha kubalulekile kokubili ngesikhathi kwengane esiswini futhi inqubo bokubeletha. Ngokwezinga Ubukhulu esikhulu okhalo kukhona conjugate yangaphandle kanye nebanga ezintathu elihambisana ophumile izingxenye amathambo okhalo kanye hip.
1. Distantia spinarum - kuyinto igebe phakathi amaphuzu ephakeme kakhulu ameva iliac. Kumayelana ayizinkulungwane ezingamashumi amabili nesithupha ngamasentimitha.
2. Distantia cristarum - isikhala phakathi crests wethambo iliac, futhi cishe amasentimitha amabili nesishiyagalombili.
3. Distantia trochanterica - ibanga okungukuthi phakathi trochanter mkhulu ngokufanele emathangeni, kuyinto 31-32 amasentimitha, ngokulandelana.
conjugate engaphandle has a isinqumo ezahlukene. Uma odlule ezintathu atholiwe ku indiza frontal, ke lena sagittal. conjugate engaphandle - ibanga phakathi projecting neseleko yesihlanu lumbar vertebra kanye nomgogodla engenhla symphysis pubic. Ukulinganisa ke, amalungiselelo athile ayadingeka. Ukunqunywa conjugates yangaphandle iqala neqiniso ukuthi isiguli walala ohlangothini lwakhe. Foot, okuyinto amanga embhedeni, owesifazane kuholela esiswini, kanye overlying - ukudansela isiginci sakhe. Jaws tazomera buhlanjululwe futhi ibekwe ngaphezu ukuhambisana pubic nemigodi suprasacral ukuze basuke cishe zifana. Lokhu - the conjugate yangaphandle. Ukumeda incike umthethosisekelo nowesifazane ukushuba ithambo lalo. I mkhulu bakuphi, aba maningi iphutha kulesi sibalo. Usayizi conjugates yangaphandle - mayelana amabili ngamasentimitha. ukubala Its ukuze kutholakale conjugate kweqiniso. Ngokwesilinganiso, umehluko phakathi kwabo oluhambisana 9 amasentimitha. Ngokwesibonelo, uma conjugate ongaphandle siyisifiso ngamasentimitha amabili, lo yangempela siwukuzibusa 11 cm.
Ubukhulu we okhalo
Kukhona into okuthiwa isitsha tapered. It kungenziwa ayisesemikhulu emtholampilo noma anatomically. Ukuze sicacise nemingcele yokwakheka ithambo izindandatho, wenze izilinganiso ukhalo.
conjugate Ovundlile - ubude kusukwa ephansi ka symphysis pubis kungxenye ophumile iningi sacrum. Kuyinto elilingana 13 amasentimitha. Kungaba azimisele kuphela lapho luhlolo lwesitho sangasese sowesifazane. Ukubalwa conjugates ka zangaphandle idayagonali kweqiniso liqukethe yokuthi kusukela yangaphandle oqothulayo 9 cm, futhi diagonal -. 2 cm Ngokuvamile, conjugate kweqiniso okungenani 11 amasentimitha. Kuyinto ukuze ukubala le ipharamitha, futhi kudingeka conjugate zangaphandle. Norma ingahluka, kuye ngokuthi ukushuba amathambo abesifazane, ngakho odokotela reinsured nokuziphatha uphenyo lwangaphakathi. On the idayagonali conjugate ithambo ukujiya ayiphazamiseki.
usayizi eqondile esidayisa okhalo lichazwa ngokuthi isikhawu phakathi yokhalo engezansi pubic okushiwo futhi ichopho coccyx. Ukumeda wenziwa tazomera futhi ilingana 11 cm.
Usayizi transverse of esidayisa okhalo - igebe phakathi tuberosities ischial. Ungakwazi ukuchitha njengoba tazomera futhi iteyipu wokulinganisa. Ngokuvamile, kuba elilingana ayisishiyagalolunye amasentimitha, kodwa uma ukushuba ungeze we izicubu zomzimba ezithambile ke sithola 11 cm.
Ubukhulu lateral we ukhalo kudingeka ukucacisa wesimethri welungiselelo amathambo. Kufanele kube okungenani 14 cm, kungenjalo ukulethwa kuyoba nzima noma kungenzeki nhlobo.
rhombus ka Michaelis
conjugate engaphandle has a kuqhathaniswa abathile rhombus futhi Michaelis, njengoba futhi libonisa ukhalo Ubukhulu. Lokhu kuyinto platform ezakhiwe ebusweni ezingemuva sacrum. Imingcele yayo:
- inqubo spinous lesihlanu lumbar vertebra;
- abhanqiwe caudineural iliac nomgogodla;
- ichopho sacrum.
Ubukhulu ngokuvamile 11 kuya ku-11 amasentimitha. conjugate engaphandle ine rhombus jikelele nge iphuzu elingenhla.
amasu Ibhukwana zokubelethisa
Ngemva amabili ngesonto obelethisayo lungacacisa ikhanda touch, emuva, futhi izitho zezikhulu ingane esibelethweni. Ngenxa yale njongo, izindlela zocwaningo zangaphandle azoya.
Indlela yokuqala: udokotela eyonquma ukuphakama fundus lesizalo nomzimba we-fetus, okuyinto eseduze nale ndlela. Ukuze wenze lokhu, lo dokotela ubeka izandla zakhe esiswini engenhla futhi azizwa ke.
Eyesibili indlela inquma isikhundla nokubukwa ingane. Kuze kube yimanje, i obelethisayo kancane kwehlisa izandla zakhe phezulu esiswini, bawendlala ngaphandle. Pushing ohlangothini ebusweni kwesibeletho, iminwe kanye entendeni udokotela azizwa backrest noma izingxenye ezincane komzimba ezingenzeka embungwini, kanjalo sokunquma, chlenoraspolozhenie ingane.
indlela Okwesithathu okudingekayo ukunquma ukuba yingxenye ukuthi wukuthi ingxenye yomzimba, esemgwaqweni ngaphezu pubis symphysis. Bangaphinde ukucacisa ukuhamba ekhanda.
Ukuqokwa wesine sigcwalisa eyesithathu. It ikuvumela hhayi kuphela ukubona ingxenye isihloko, kodwa kwakufanele baqonde nendlela kahle maqondana umnyango indishi encane. Ukuze wenze lokhu, lo dokotela uthola emuva esigulini futhi isandla ngendlela yokuthi iminwe bukhomba ngaphezu symphysis pubic.
Buka futhi isikhundla fetus esibelethweni
Isikhundla - sesimweni ingane emuva ohlangothini lesizalo. Hlukanisa endaweni yokuqala lapho backrest itholakala ohlangothini lwesobunxele, kanti eyesibili - lapho ingane yabuyela emuva ngakwesokudla. Isikhundla kuqala kwande ngaphezu lakamuva.
Buka isikhundla - emuva sengqondo maqondana odongeni phambi noma ezingemuva kwesibeletho. Ngakho, uma ingane encike udonga phambi kwesibeletho, uthi ukuma phambi, futhi okuphambene nalokho.
Lapho elingaphandle OB Leopold-Levitsky amasu ukuvumela udokotela ukuze kutholakale indawo umbungu ngesikhathi sokubeletha bese ukubikezela.
ucwaningo Yangaphakathi Midwifery kungaba kwenziwe nge iminwe emibili noma ezine noma sonke isandla. Ngesikhathi udokotela touch ungakwazi kutholakale umsuka wendaba yesihluku dilatation wesibeletho, ukukhomba ingxenye nekwetfula, ubuqotho ulwelwesi, isimo emgudwini wokuzala. Ngaphezu kwalokho, le ndlela iba yimali yesinqumo esingashintshi ukukhuthazwa ashukumisayo lokuzalwa canal wengane.
Nokho, lokhu ekwenza kokungenela sina, futhi enze inqubo kumele kube ngokuqinile ngokuvumelana nemithetho: ku yokwemukela esibhedlela bese hhayi kaningi kunakuqala njalo ngemva kwamahora amabili. I kancane, ngcono.
Lolu cwaningo kuqala ngokuhlola we zangasese bangaphandle perineum. Khona-ke iminwe yethulwe zingene sangasese iphinde ichaze yayo ubude, ububanzi, kuyaqina izindonga, izibazi, strictures noma ukuvuvukala ezingavimbela ukugeleza kwezidingo. Ngemva kwalokho, liyasondela wesibeletho. It lwavivinywa ukuvuthwa, ijamo, ubungako kanye ukuthungwa, kunciphisa futhi akuthanjiswanga. Uma owesifazane uba nemihelo, ukudalulwa wesibeletho kubalwa umunwe-mgwaqo. Ngaphezu kwalokho, udokotela lizama ukuthola nekwetfula ingxenye futhi ukucacisa isikhundla ikhanda ukuze silungiselele yezinkinga kungenzeka.
Ukunqunywa ikhanda isikhundla womntwana
Kukhona degrees ezintathu ukwandiswa ikhanda lapho sidlula emgudwini wokuzala.
Izinga lokuqala (Ukufakwa perednegolovnoe) kusho ukuthi ikhanda siyodlula lingakanani ukhalo oqondile. Kuyinto elilingana 12 cm. Lokhu kusho ukuthi wesibeletho kanye emomozini kufanele luhlanganise phezu kwaleli nani.
degree Okwesibili (Ukufakwa frontal) uhambelana yobukhulu enkulu fibre kwenqwaba (13-13.5 cm). Kuzoba ingxenye enkulu okungukuthi ukuba adabule emgudwini wokuzala.
Degree Okwesithathu (Ukufakwa ebusweni) uthi umbelethisi ukuthi ingane ihamba ngokusebenzisa ukhalo nazo phambili, bese, ubukhulu ngobukhulu ikhanda zizongena 9.5 cm.
Izindlela zokuvimbela inzalo amaphilisi okuhlela nabancelisayo: inzuzo ngaphandle umonakalo
Kusukela lokho kungaba ukhulelwe? Inqubo sokukhulelwa
Sun umugqa phezu esandleni e ukubhula ngokufunda intende: incazelo kanye nencazelo